Ndeupi nhangemutange iri nyore? | Kugadzira uye zvidzidzo
Ndeupi nhangemutange iri nyore?
Maite Nicuesa | 28/04/2022 23:46 | Yakagadziridzwa ku 28/04/2022 23:51 | Kudzidziswa
Ndeupi nhangemutange iri nyore? Uyu mubvunzo unowanzo bvunzwa nevaya vari panguva yekuita sarudzo yekutanga nhanho nyowani muyunivhesiti. Zvakajairika kuongorora danho rekuomerwa kubva pakuona kwese, zvisinei, kune zvakawanda zvakasiyana zvinopesvedzera maonero emaitiro edzidzo. Kana mudzidzi akakurudzirwa uye akazvipira kuchinangwa chake, maonero ekuoma anochinja. Chinhu chimwe chetecho chinoitika apo mudzidzi anonyura mumisoro yaanonyatsoda uye inomubvumira kukudziridza tarenda rake uye hunyanzvi hwake.
Chiratidzo chekuomerwa kwakatenderedza nhangemutange, kazhinji, inoenderera mberi nekutanga mutsauko unokosha pakati pemafambiro esainzi netsamba. Uye mune chero maitiro ezvidzidzo kune maawa ekudzidza, kuzvipira kune chirongwa, chiono chenguva refu uye kutsungirira. Ndeipi iyo kumhanya nyore zvako? Ndiko kuti, zviri nyore kunyura mumubvunzo kubva pamaonero emunhu. Nenzira iyi, zvinokwanisika kurongedza kuumbwa kwakasarudzwa netarenda rega.
1 1. Ndezvipi zvidzidzo zvakakuitira nyore kusekondari?
2 2. Teerera chikonzero chako uye manzwiro ako
3 3. Tarisa purogiramu yakazara yemarudzi akasiyana
4 4. Bvunza uye tsvaga
1. Ndezvipi zvidzidzo zvakakuitira nyore kusekondari?
Asati atanga danho reyunivhesiti, mudzidzi akatotarisana nematambudziko akakosha. Akasangana nematambudziko akaedza kutsungirira uye kusimba kwake. Nyora nezvidzidzo zvaunoda uye izvo, kuwedzera, hazviratidzike zvakanyanya kuoma. Shandisa ruzivo irworwo sereferensi sosi kuti uwane mabasa anonyura zvakadzika muzvidzidzo izvozvo.
2. Teerera chikonzero chako uye manzwiro ako
Iyo yekudzidza maitiro inokoshesa ruzivo. Mamwe ematambudziko anowanikwa panguva yekudzidza anowira munharaunda iyi. Nekudaro, kuzviziva pachako kunogona zvakare kukubatsira iwe kuona basa rinouya nyore kwauri. Kare, takakukurudzira kuti uite rondedzero yezvidzidzo izvo zvawakawana mamakisi epamusoro. Unonzwa sei paunotarisana nenyaya inoita seyakareruka kwauri? Chiyero chekukurudzira chinokura.
Ukuwo, chinetso chinofungidzirwa kuti chakaoma zvikuru chinogona kuparira kuvhiringidzika. Paunodzidza zvemukati zvaunonyatsoda uye zvinobata pfungwa dzako, maonero enguva anochinja. Mukupesana, paunonyura mune imwe nyaya inokufinha, maawa anoita seasina kumira. Naizvozvo, zvidzidzo zvinoita sezviri nyore kwauri ndezviya zvinoburitsa manzwiro anofadza sekunyepedzera.
3. Tarisa purogiramu yakazara yemarudzi akasiyana
Kuti uve nemaonero akazara emadzinza awakamboongorora kusvika parizvino, nyatsotarisa chirongwa cherwendo rwega rwega. Ita ongororo yakajairika yezvidzidzo zviri chikamu chekarenda yezvidzidzo. Nzira yekuita sei ongororo yepasi rose yezinga rekuoma? Somuenzaniso, unogona kuziva zita rechidzidzo chiri kure nezvaungatarisira. Huwandu hwezvidzidzo zvakaoma kazhinji hunowedzera mwero wekuoma kwedzidzo.
4. Bvunza uye tsvaga
Zvinokwanisika kuita fungidziro yenhangemutange kubva pane zvaunotarisira iwe pachako. Nekudaro, maonero emunhu anogona kusaenderana neicho chaicho chechirongwa. Semuenzaniso, unogona kutaura nevamwe vanhu vakadzidza basa rinomutsa kufarira kwako kana kusimudza chero mubvunzo kunzvimbo yezvidzidzo inodzidzisa mafambiro iwayo.
Basa rinozonyanya kukuitira nyore ndeiro rinoenderana netarenda rako, nezvaunotarisira, nekukurudzira kwako uye nekwaniso yako. Nenzira iyi, une zvakawanda zvekushandisa zvekutarisana nematambudziko ari chikamu chemaitiro ekudzidza. Ndiko kuti, sarudza kudzidziswa kuri mukati menzvimbo yako yekunyaradza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Kudzidziswa » Ndeupi nhangemutange iri nyore?
Chii chinonzi Feynman Method?
Chii chinonzi Cornell nzira?